I-China FL928 1600kgs i-mini wheel loader 1.6ton ZL16 imboni yokulayishwa kwesondo elihlangene nabahlinzeki |LAYISHA
1-Idizayini yokubukeka elula, enhle futhi ephanayo.
I-2-Isistimu yokuqondisa ye-hydraulic ngokugcwele, isilawuli senduku yokudlala ukuze uqiniseke ukuthi usebenza kalula.
Ikhabethe le-3-Rops/Fops, isihlalo sokumisa umoya semishini, i-heater, isibani esiyisixwayiso, ikhamera engemuva;indawo yokusebenza ikhululekile.
4-Inketho esheshayo yokushaya ukuze uqiniseke ukuthi ungasebenzisa izesekeli ezihlukene futhi uhlangabezane nokusetshenziswa okuhlukile kokusebenza: imfoloko yephalethi, ibhakede elingu-4in1, ibhakede lokulahla phezulu, ukubanjwa kwezinkuni/utshani, okokuvuthela iqhwa, i-V-blade yeqhwa, i-sweeper, ibhakede leqhwa elinephiko le-hydraulic, isando njll.
5-Injini yomkhiqizo ehlukile, isiyondisi somoya uyazikhethela.
I-FORLOAD inikeza amamodeli alayisha amasondo angaphezu kwayisikhombisa emakethe: FL926, FL928, FL936, FL938, H928M, H930, H950 kanye ne-H960, wonke anemishini yokugcina ye-EURO2, EURO3, EURO5 noma i-Tier4.Ibhrendi iyaqhubeka nokukhula, i-FORLOAD iphinde yatshala imali emshinini wayo nezindawo zokusabalalisa izingxenye.
I-FORLOAD wheel loader, mayelana nokunethezeka komsebenzisi, ikhabhu ine-A/C, AM/FM kanye nomsakazo we-USB, futhi i-ROPS/FOPS egunyazwe ngokubonakala okuhle kakhulu okungu-360-degree endaweni elungele ukusebenza.Ukwengeza, injini yayo yokunakekelwa okuphansi nezici eziyisisekelo ziyenza ibe lula, isilayishi esihlangene ngentengo ethengekayo.
Izilayishi zamasondo ze-FORLOAD zilungele izinhlelo zokusebenza ezesizini noma ezingadingi amahora amaningi okusebenza.Imishini futhi ilungele abanikazi abangathola inani le-loader ethembekile, enezindleko eziphansi esekelwa iwaranti yezinyanga eziyi-12, amahora angama-2000, eneziqinisekiso ezinwetshiwe ezitholakalayo.Izilayishi zamasondo ze-FORLOAD ziwumshini wasegcekeni okahle wabalungisi bendawo abanamayadi ezitolo zamatshe noma ama-mulch futhi abenza umsebenzi wenkontileka yeqhwa ebusika.
Izilayishi zamasondo ze-FORLOAD ziklanyelwe ukusebenza okuthembekile nokuhlala isikhathi eside ezinhlelweni eziningi ezihlukahlukene, kanye nemisebenzi ehlukahlukene ezinhlelweni zikahulumeni ezidinga umshini onekhono, owenza izinto ezihlukahlukene olingana nesabelomali.
Ukucaciswa okuyinhloko nohlu lwamanani:
Ubukhulu obuphelele (L*W*H)
Umthamo webhakede ojwayelekile
Uhlobo lokuguqula i-torque
Imodeli engu-265B, isilawuli senduku yokudlala yeHydraulic
Amabili phambili, amabili ahlanekezela
I-air brake ngamasondo amane
Shayela uhlobo lwe-ekseli
Ukuncishiswa kwehabhu lamasondo
Bhuka ilungelo lokushintsha amapharamitha nedizayini ngaphandle kwesaziso sangaphambili.
Sineqembu elifanelekayo, elisebenza kahle ukunikeza ukwesekwa okuhle kakhulu kumakhasimende ethu.Ngokuvamile silandela inkambiso yokugxila kumakhasimende, imininingwane egxile e-China Intengo eshibhile I-China FORLOAD I-Brand Mini Electric Wheel Loader FL928 ene-CE, Uma kungenzeka, khumbula ukuthumela izidingo zakho ngohlu olunemininingwane ehlanganisa isitayela/into nobukhulu obudingayo.Sizobe sesikuthumelela amanani ethu angcono kakhulu.
I-China Intengo eshibhile I-China Mini Electric Wheel Loader, Isilayishi Esinamasondo Ebhethri Amancane, Sineminyaka engaphezu kwe-10 isipiliyoni sokuthunyelwa kwamanye amazwe futhi imikhiqizo yethu ithumele amazwe angaphezu kwama-30 emhlabeni jikelele.Sihlala sibambe i-tenet yesevisi kuqala, Ikhwalithi kuqala engqondweni yethu, futhi siqinile ngekhwalithi yomkhiqizo.Siyakwamukela ukuvakasha kwakho!
Okwedlule: I-FL926 1500kgs i-mini wheel loader 1.5ton encane yesilayishi samasondo
Olandelayo: I-FL936 1800kgs isilayishi esincane samasondo angaphambili angaphambili i-ZL18 isilayishi sikagandaganda sasepulazini
I-FL938 2000kgs i-wheel loader 2t radlader ene-YUN...
Isondo lebhethri le-H906D elincane likagesi likagesi ...
1ton kagesi mini wheel loader nge lithium ba...
I-H928M compact wheel loader ene-CUMMINS EPA4 en...
I-H960 big wheel loader 6tons esetshenziswa i-SEM wheel loader